Forum serasera malagasy VAOVAO MATV 10 FEVRIER 2012 - Dinika forum.serasera.org
VAOVAO MATV 10 FEVRIER 2012
Fitohizan'ny hafatra : VAOVAO MATV 10 FEVRIER 2012
rijadolly - 11/02/2012 17:26
Nandray ny mpanao gazety teny an-tranony eny Manjakatompo, Ravalomanana Tojo, zanaky ny filoha teo aloha, io maraina io. Nivoaka tamin'ny fahanginany, ka nanameloka ny fisavana tsy ara-dalàna nataon'ny DST tokoa ity lahiaivon'ny fianakaviana Ravalomanana ity.
rijadolly - 11/02/2012 17:27
Namoaka fanambarana mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny antoko TGV. Mitaky ny fampiharana manontolo ny soridalana ary ny fanatanterahana fifidianana amin'ity taona ity 2012 ity, ity antoko ity.
rijadolly - 11/02/2012 17:28
Manohana ny fiverenana an-tanindrazana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany kosa ny avy eo anivon'ny vehivavy TIM. Ho azy ireo, dia tsy mitombona ny didim-pitsarana nivoaka momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Rehefa tsy tazana teo amin'ny sehatra politika tao anatin'ny volana maromaro, ny filohan'ny kaongresy teo aloha Raharinaivo Andrianatoandro, dia nivoaka tamin'ny fahanginany. Nisy ny fanehoan-kevitra izay nataony manoloana ny raharaham-pirenena.
rijadolly - 11/02/2012 17:29
Nitondra ny heviny mahakasika ny kabary nataon'ny filohan'ny tetezamita, ny avy amin'ny ankolafy Zafy Albert no sady filohan'ny Rodobe Toamasina. Tamin'izany no nilazany, fa mitady hiala amin'ny fampiharana ny tondrozotra ny filohan'ny tetezamita.
rijadolly - 11/02/2012 17:30
Hohamafisina hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'i Madagasikara sy ireo firenena namana. Vonona ihany koa ireo firenena ireo ny hanampy an'i Madagasikara amin'izay sehatry ny fiaraha-miasa izay. Ireo no anisan'ny nisongadina nandritra ny lanonana fifampiarahabana tratry ny taona teo amin'ny minisitry ny Raharaham-bahiny sy ireo masoivoho miasa sy monina eto amintsika, omaly.
rijadolly - 11/02/2012 17:31
Anisan'ny nankalaza ny faha-3 taonan'ny 7 Febroary 2009 ny any amin'ny faritra hafa. Nisy ny lanonana notanterahana tao Farafangana, ny talata 07 Febroary lasa teo. Ny akon'izany indrindra no entina amin'ity fanadihadihana manaraka ity.
Nifarana androany hariva ny fihaonamben'ny mpitsara, izay notanterahana nandritra ny hateloana, teny amin'ny lapan'ny fitsarana tampony eny Anosy. Navoaka androany ary ny fehinkevitra izay mirakitra ny tokony ahatongavana amin'ny fahaleovantenan'ny fitsarana.
rijadolly - 11/02/2012 17:32
Hampiantso fivoriana lehibe ahitana ny solotenan'ny isan-tsokajiny voakasiky ny raharahan'ny fampianarana ambony, ireo mpianatra avy ao amin'ny fakioliten'ny siansan'ny oniversiten'Antananarivo, amin'ny alatsinainy 13 Febroary ho avy izao.
rijadolly - 11/02/2012 17:33
Ho jerena manokana ireo orinasa mandray mpiasa Malagasy any ivelany, hamarinina avokoa ny taratasy sy ny toerana misy azy ireo. Maro ireo Malagasy no mitady asa any ivelany amin'izao noho ny tsy fisian'ny asa eto an-toerana, ka hisy noho izany ny fanaraha-maso ataon'ny minisitry ny Asam-panjakana sy ny Lalàna sosialy.
Mitondra ny anarana hoe Giovanna ilay rivo-doza niforona omaly alina tao amin'ny ranomasimbe Indiana. Raha ny vaovao farany voaray avy eny anivon'ny sampandraharaha mpamantatra ny toetr'andro, dia any @ 1250 km antsinanan'ny ranomasimbe Indiana no misy ny foibeny.
rijadolly - 11/02/2012 17:34
Nitrangana lozam-pifamoivoizana iny lalam-pirenena faha-7 iny, io antoandro io. Fiara lehibe mpitatitra gonim-bary iray tokoa no nivadika ka nitsivalana teo amin'ny arabe. Vokatry ny tsy fanajana ny lalànan'ny fifamoivoizana no tena fototr'izao loza izao, araka ny fanazavana voaray tamin'ireo nanatri-maso.
rijadolly - 11/02/2012 17:35
Mihamahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana amin'iny lalam-pirenena faha-07 iny. Hatramin'ny fiandohan'ny taona, dia 3 ny fanafihana mitam-basy tamin'izany lalam-pirenena izany. Hita taratra ihany koa izay tsy fandriampahalemana izay eny amin'ny toby fiantsonan'ny fiara eny amin'ny fasan'ny karana Ankadimbahoaka.
rijadolly - 11/02/2012 17:36
Na dia anisan'ireo kely indrindra aza ny tetibola ampiasain'ny minisiteran'ny Tanora sy ny Fialamboly, dia ezahana hatrany ny hanampy ireo mpiasa amin'ny alalan'ny fampitaovana azy ireo. Izay no anisan'ny fampanantenana nataon'ny minisitra Ulrcih Andriantiana, androany, nandritra ny lanonana niarahabana azy nahatratra ny taona vaovao.
rijadolly - 11/02/2012 17:37
Nanainga ho an'i Cotonou, renivohitr'i Bénin, i Constantin Grant mivady, solotenan'ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung , nanatanteraka iraka teto amintsika nandritra ny 2 taona, mikasika ny fampiroboroboana ny sehatry ny demokrasia.
Page rendered in 4.2241 seconds